Inona no ilainao amin'ny lanitra mijery?
Top 5 Gotta-Haves ho an'ny Stargazing
Matetika ireo kintana voalohany no manontany hoe: "Inona no mila vidiana ho mpanara-maso ny lanitra?" Ny hevitra dia hoe raha te-hijery ireo kintana sy planeta ianao dia mila teleskaopy, sarin-kintana, ary ordinatera. Marina fa mahafinaritra tokoa ny manana fitaovana, saingy tsy maintsy manana ny "zavatra tsara" ianao.
Voalohany, mila toerana tsara ianao (lavitra ny jiro mazava). Mety ho valan-jaridaina akaiky, ny tokotaninao, na toerana iray ora na roa lavitra ny tanàna.
Aorian'izay dia mila manokana fotoana hikarakarana ny lanitra ianao. Miandrasa mandany adiny iray eo ho eo eo amin'ny toerana fijerinao ary manjary maizina. Tena zava-dehibe ny fampiasana ny masonao amin'ny haizina mba hahafahanao mahita kintana sy planeta mora kokoa.
Raha tsy fantatrao tsara ny kintana sy ny antokon-kintana dia aza manahy. Amin'ny fotoana efa nibanjinanao imbetsaka, ianao dia hanomboka hianatra vitsivitsy amin'ireo zavatra mora kokoa ho an'ny selestialy.
Andriamanitra-Haja ho an'ny Stargazing
Mazava ho azy fa misy zavatra hafa mahasoa izay manampy amin'ny fanamafisana ny fahamaizanao sy ny fialan-tsasatra, izay voatanisa eto amin'ny lisitra "Top 5" haingana ho anao ampiasaina.
Fitafiana mifanentana. Ny Stargazing dia mametraka anao any ivelany ary manaiky ny hatsaran'ny toetr'andro. Ny takariva hariva sy ny maraina dia mety ho kivy, na dia any amin'ny faritra mafana aza. Ataovy azo antoka fa manana jirobe, satroka, ary menamena ianao rehefa mijery ny lanitra. Azonao atao ny manala azy ireo foana raha hafana loatra.
Sarin'ny kintana. Misy ihany koa ireo boky tsara, gazety, tranokala, ary fampiharana izay manolotra sarintan-tsary ho anao. Ny gazety Astronomia toy ny Sky & Telescope (Etazonia, Aostralia), Astronomie , SkyNews (any Canada), Astronomy Now (UK), Astronomie sy Space (Irlanda), Coelum (Italia), Tenmon Guide (Japan) Manana karatry ny kintana isam-bolana mandritra ny fanontam-pirintany sy ny fanontana an-tserasera. Skymaps.com dia manana tarehin-tsoratra printy ho an'ny tranokala sy ny fanontana any an-trano. Miaraka amin'ny fiavian'ny planetarium apps ho an'ny iPhone, iPad, Android, ary fitaovana hafa, manana safidy maro ho an'ny karazan'antoka ianao mba hitarika anao eny amin'ny lanitra.
Masolavitra. Ny ankamaroan'ny olona dia manana lamosina maromaro mandry manodidina, ary fomba iray tsara ny manandratra ny fijerinao ho toy ny kintana. Alao sary an-tsaina hoe mijery ny Moon ianao ary te hizatra amin'ny crater. Na, hitanao ny "zavatra" iray any an-danitra. Ny fitoeran'ny fitoeran-tsary 7x50 na 10x50 dia hanampy anao hahita fomba fijery mazava kokoa.
Mpitsoa-pifaliana iray na roa . Ny fandinihana ny lanitra amin'ny alina dia hetsika lehibe ataon'ny fianakaviana na zavatra atao amin'ny namana mitovy hevitra. Mahafinaritra ny mijery ireo planeta, kintana, ary antokon-kintana!
Boky astronomie tsara. Farany, manampy ny boky foana ny boky rehefa miala sasatra. Ny bokin'ny ankizy tsara dia ny HA Rey no mahita ireo antoko . Ireo zokiny dia mety mankafy ny bokiny antsoina hoe, The Stars: Fomba vaovao hijerena azy ireo. Raha tianao ny hianatra bebe kokoa momba ny astronomia amin'ny siansa, dia jereo ny bokiko (mifamatotra amin'ny bio), antsoina hoe Astronomia 101 . Ny surf-n'ny Internet koa dia fomba tsara hianarana bebe kokoa momba ny astronomia, ary ny iraka rehetra, ny masoivoho ary ny masoivohitry ny habaka dia manana tranonkala feno fahalalana momba ny kintana sy planeta ary vahindanitra. Ny fomba iray hafa hianarana ireo kintana dia ny mandeha any amin'ny planetarium eo an-toerana ary mandray anjara amin'ny "What's Up Tonight".
Misy zavatra mahafinaritra maro any an-danitra mba hikaroka.
Ny tena ilainao atao dia ny mivoaka any ary manomboka mitraka! Ny planeta mamirapiratra dia matetika hita ho tara-pahazavana mazava. Rehefa manjombona ny lanitra dia hijery ny kintana. Rehefa mandeha ny fotoana, dia hahita kintana maro kokoa ianao, arakaraka ny habetsahan'ny loto mipoitra eo amin'ny lanitra misy anao. Ny zavatra manan-danja dia ny mamolavola fotoana hiverenana isaky ny afaka manao izany.
Jereo ny vokatra an-tserasera
Ho an'ny fiononanao, eto Amazon dia mifandray amin'ny sasantsasany amin'ireo vokatra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity.
Find the Constellations, avy amin'i HA Rey
Ny kintana: fomba vaovao ahafahana mahita azy ireo, avy amin'i HA Rey
Lalao NFL miaraka amin'ny rakitsary ratsy indrindra
Inona ny Mineraly Kely Indrindra?
5 Toasty Torohevitra Ho Mijanona Amin'ny Toetrandro Amin'ny Ririnina
Astronomie 101: Fikarohana ny rafi-masoandro ivelany
Biôlôjia sy suffixes: glyco-, gluco-
Biôlôjika sy suffixes: proto-
Ny lalan'ny mpanjaka amin'ny Achaemenids
Mianara momba ny Hypothesis Null sy ny Hypothesis Alternative
Fanampiana mba hanatsarana ny fahaiza-mihaino anglisy
Fampiatoana ny fanabeazana sy ny fanabeazana ara-pananahana any Etazonia
Mpihira Music of R & B Singer Avant
Ireo loharano avo indrindra ho an'ny "Sacred Sukhmani" Prayerbook, CD ary Download
Ahoana ny fandehanana Fantasy Basketball
10 Mpandresy Bowl Teams amin'ny fotoana rehetra
Vehivavy mpitsikilo tamin'ny Ady Lehibe I sy ny Ady Lehibe II
Tantaran'ny Hockey: The Time Line, 1917-1945
Ny rivotra goavana any Irlandy
Earlham College GPA, SAT sy ACT Data
Miresaka amin'ny teny Soahily amin'ny teny Espaniola
The Rush Gold California
Christian iPhone sy iPad Apps
Ampiasao ny Fizika Quantum mba "hizaha" ny fisian'Andriamanitra
Ny ankamaroan'ny Cup Stanley no nandresy tamin'ny Mpilalao
Fahatakarana ny Jiosy Hasidic sy Jodaisma Ultra-Orthodox
Tantaram-pirahalahiana sy biography of David, Mpanjaka Taloha
Fomba fanasitranana fahiny: ny fitsaboana drum
Ny zon'ny mpanompo sampy sy ny Wiccans any amin'ny toeram-piasana